तपाईंको ब्लक व्यवस्थित गर्नुहोस्! • DutchtownSTL.org • डचटाउन, सेन्ट लुइस, MO
सामग्रीमा स्किप गर्नुहोस्।
डचटाउन मुख्य सडकहरू
तपाईंको ब्लक व्यवस्थित गर्नुहोस्!
यसमा साझेदारी गर्नुहोस् फेसबुक
मार्फत पठाउनुहोस् इमेल
डचटाउनस्टेल, डचटाउन मुख्य सडकहरू, डचटाउन साउथ कम्युनिटी कर्पोरेशनर डचटाउन समुदाय सुधार जिल्ला कम्तिमा ब्लकहरू र एक सशक्त डचटाउन व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्न टीमहरू छन्!
एक अर्कालाई चिन्ने र बाहिर हेर्ने छिमेकीहरू बलियो समुदायको मेरुदण्डको गठन गर्दछन्। एक संगठित ब्लक, केहि औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा संगठित, सुरक्षा वृद्धि, सौंदर्यशास्त्र सुधार, नयाँ छिमेकीहरू आकर्षित, र चीजहरू पूरा गर्दछ।
हामी कसरी आफ्नो ब्लक व्यवस्थित गर्ने?
हामी ब्लकहरूलाई संसाधनहरूमा जडान गर्न चाहन्छौं ताकि तिनीहरू प्राप्त र व्यवस्थित रहन सक्दछन्। यहाँ छ तपाईंको ब्लक जानको लागि हाम्रो तीन चरण प्रक्रियाको एक रौंडाउन।
भर्जिनियाको 4400 XNUMX०० ब्लकका छिमेकीहरू आयोजनाको बारेमा छलफल गर्छन्।
सम्पर्क गर्नु! तपाईंको छिमेकीलाई सोध्नुहोस् कि यदि उनीहरू तपाईंको ब्लकमा अधिक जडान र स्रोतहरू ल्याउन ब्लक आयोजनमा रुचि राख्दछन्। यदि त्यो छिमेकी व्यस्त छ भने, अर्को छिमेकीलाई र अर्को छिमेकीलाई सोध्नुहोस्, जब सम्म तपाईं कोर समूह नियमित आधारमा कुराकानी सुरु गर्न इच्छुक पाउनुहुन्न।
हामीलाई सुरु गर्नुहोस् ती सुरुका अन्तर्क्रियामा सहयोग पुर्‍याउनुहोस् जसले तपाईंलाई सुरू गर्दछ। यदि तपाईंको ब्लक चलिरहेको मुद्दाको वरिपरि व्यवस्थित गर्दछ, वा केवल एक अर्कालाई अझ राम्ररी जान्न चाहनुहुन्छ, हामी व्यक्तिलाई सँगै ल्याउन मद्दत गर्न सक्छौं।
हामी तपाईंलाई टिप्स र उपकरणहरू तपाईंको छिमेकीहरू समक्ष पुर्‍याउन दिन सक्छौं। हामी छिमेकीहरु पनि अनुभव लिनका लागि आफ्नै ब्लकहरु संगठित गर्न को लागी ल्याउछौं प्रक्रिया र तपाईको ब्लकमा उपलब्ध विकल्पहरु लाई छलफल गर्न।
संचार प्रत्येक ब्लक को लागी फरक हुनेछ। डचटाउनमा केहि ब्लकहरूले मेसेजिंग अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्दछ जस्तै ग्रुपमे, अन्य पाठ, केहि ईमेल सूची, र अन्य फेसबुक समूह।
तपाईंको ब्लकको लागि नि: शुल्क वेबसाइट
यहाँ एक वेबसाइट पाउनुहोस् DutchtownSTL.org समाचार, घटनाहरू, र श्रोतहरू तपाईंको ब्लाकमा छिमेकीहरूसँग साझेदारी गर्न मद्दत गर्न! 4200२०० लुइसियानाबाट आएको उदाहरण हेर्नुहोस् or हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस सेट अप गर्न को लागी!
थप रूपमा, डचटाउनस्टालले तपाईं र तपाईंको छिमेकीहरूका लागि स्रोतहरू केन्द्रित गर्न, समाचार साझा गर्न, बैठकको समय सेट अप गर्न, र अधिकमा वेबसाइट सिर्जना गर्न सक्दछ। हामीले के बनाएका छौं त्यसमा एक नजर राख्नुहोस् 4200२०० लुइसियानाको ब्लक.
हामी तपाईंलाई तपाईंको ब्लकको लागि सबैभन्दा प्रभावकारी सञ्चार विधिहरू फेला पार्न र सेट अप गर्न मद्दत गर्नेछौं। संचार एक संगठित ब्लक स्थापना र कायम गर्न कुञ्जी छ। हामीले विभिन्न ब्लकहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न विभिन्न विधिहरू पाएका छौं। याद गर्नुहोस्, सम्मानजनक हुनु भनेको खेलको नाम हो, र हामीले पनि यसमा केही सूचकहरू पाएका छौं।
डचटाउनमा स्थानीय रूपमा धेरै स्रोतहरू उपलब्ध छन्। डचटाउन मेन स्ट्रिट कार्यक्रमको बारेमा सबैलाई जानकारी दिइरहेको छ कि छैन मार्क्वेट पार्क, पूंजी सुधारको लागि डचटाउन सीआईडी ​​जाँदै, वा डचटाउन साउथ कम्युनिटी कर्पोरेशनमा सामेल हुने समुदाय सशक्तीकरण समिति तपाईंको ब्लाकमा संसाधनहरू प्राप्त गर्न, डचटाउनमा एउटा समूह तपाईंको ब्लकको साझा लक्ष्यमा काम गर्दैछ।
प्लग इन हुनुहोस्!
फेला संगठन र स्रोतहरू यसले तपाईंलाई अझ राम्रो ब्लक निर्माण गर्न मद्दत गर्न सक्छ!
डचटाउनका संगठनहरूले तपाईंलाई व्यक्ति, शहर विभागहरू, स्लाको, ब्राइटसाइड सेन्ट लुइस, को अर्बन लिगको ब्लक एकाइहरूको संघ, STL म्युचुअल सहायता, र अन्य संगठनहरू तपाईंको छिमेकीहरूलाई सँगै ल्याउन र तपाईंको ब्लकमा मुद्दाहरूको समाधान गर्न। डचटाउनस्टालले एक कहिल्यै विस्तार हुने पुस्तकालय पनि प्रदान गर्दछ अनलाइन स्रोतहरू। कामहरू सम्पन्न गर्न शहरको प्रक्रियाहरू नेभिगेट गर्न सिक्न गाह्रो हुन सक्छ, तर हामी यहाँ मद्दत गर्न छौं।
हामी कसरी प्लग इन गर्न सक्दछौं हेर्नुहोस्.
अब हामी के गर्छौं?
हामी तपाईंलाई आज सुरु गर्न मद्दत गर्न तयार छौं! एक पटक तपाईं माथि उल्लेखित हाम्रो प्रक्रियामा एक नजर राख्नुभयो भने, तपाईं हाल कहाँ उभिनु भएको सूची लिनुहोस्, र हामीलाई खाली ठाउँहरू भर्न मद्दत गर्नुहोस्।
आफैलाई सोध्नु पर्ने केहि प्रश्नहरु:
के हामीसंग अरू छिमेकीहरू छन् जो इच्छुक छन् वा पहिले नै संलग्न छ?
के हामीलाई थाहा छ हाम्रा छिमेकीहरू कहाँ पुग्ने?
हाम्रो ब्लक कसरी संचार गर्छ? के यो प्रभावकारी छ?
के हाम्रो ब्लकमा ध्यान दिनको लागि एक विशिष्ट मुद्दा वा मुद्दाहरू छन्?
हामीले हाम्रो ब्लकका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न के गरेका छौं?
एकचोटि तपाईंले आफ्नो ब्लकको आवश्यकताहरू मूल्या have्कन गरेपछि, हामीसँग सम्पर्कमा रहनुहोस् र हामीलाई भन्नुहोस् कि हामी कसरी मद्दत गर्न सक्छौं! पृष्ठको तल मात्र फारम भर्नुहोस्।
मलाई यकिन छैन भने यदि मेरो ब्लक तयार छ
ठिकै छ! हुनसक्छ तपाई आफैलाई संगठन र मानिससँग राम्रोसँग डचटाउनका लागि परिचित हुन बढी समय लिन चाहानुहुन्छ। तपाईं विचार गर्न सक्नुहुन्छ स्वयं, मध्ये एकमा सामेल डचटाउन समितिहरु, एक आउँदै छिमेकी बैठक, वा कुनै पनि को लागी छोड्दै छिमेकको घटना.
यदि तपाईं निश्चित हुनुहुन्न कि यदि ब्लक आयोजन तपाईंको लागि सही छ भने, स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस् हामीसँग सम्पर्क राख्नुहोस् र हामी कसरी छलफल गर्न सक्छौं तपाईं कसरी एक बलियो डचटाउन मा फिट!
हामीलाई साइन अप गर्नुहोस्!
तल हामीलाई थोरै जानकारी दिनुहोस्, र हामी तपाईंलाई ASAP सुरु गर्न मद्दत गर्नेछौं!
के तपाईं पहिले नै अन्य छिमेकीहरूसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ? हो होइन
के तपाईंसँग पहिले नै एक छिमेकीहरूसँग कुराकानी गर्ने तरीका छ? हो होइन जस्तै फोन नम्बर, ईमेल ठेगानाहरू, वा नियमित-व्यक्तिगत सम्पर्क
तपाईं किन आफ्नो ब्लक व्यवस्थित गर्न चाहनुहुन्छ?
बस मैत्री हुन सुरक्षा मुद्दाहरू (अपराध, यातायात, आदि) सौंदर्यीकरण मुद्दाहरू (सफा, बागवानी, आदि) अन्य मुद्दाहरू (डम्पि,, खाली भवनहरू, आदि) लागू हुने सबै जाँच गर्नुहोस्।
यस फारमले Google reCaptcha v3 स्पाम रोक्न प्रयोग गर्दछ। (हेर्नुहोस् गोपनीयता नीति र सेवाका सर्तहरु)
यस पृष्ठ साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पृष्ठ अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो नोभेम्बर 13th, 2021 .
डचटाउन STL.org तपाईंको ब्लक व्यवस्थित गर्नुहोस्!
DT2 ow डाउनटाउन डचटाउन
मार्क्वेट पार्कको सहयोगी
DutchtownSTL अनुसरण गर्नुहोस्
DutchtownSTL.org अनुवाद गर्नुहोस्
अंग्रेजी (English) • español (Spanish) • Tiếng Việt (Vietnamese) • አማርኛ (Amharic) • العربية (Arabic) • বাংলা (Bengali) • ဗမာ စာ (Burmese) • Bosanski (Bosnian) • 简体 中文 (Chinese) • Français (French) • नेपाली (Nepali) • فارسی (Pashto) • پښتو (Persian) • Afsoomaal को (Somali)
© २०१––२०१ Dutch डचटाउनस्टाइल र डाउनटाउन डचटाउन। DutchtownSTL.org प्रयोग गरेर, तपाईं हाम्रोसँग सहमत हुनुहुन्छ गोपनीयता नीति र नियम र सर्तहरू। DutchtownSTL.org कुकीहरूको प्रयोग गर्दछ उत्तम उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान गर्न र हाम्रो वेबसाइटको प्रयोगको विश्लेषण गर्न।
शीर्ष मा फिर्ता.
DutchtownSTL.org मा अधिक
हाम्रो विस्तृत सूची जाँच गर्नुहोस् छिमेकी संसाधनहरू हाम्रो मार्गनिर्देशकहरूको साथ:
नागरिकको सेवा ब्यूरो
छिमेकी सुधार विशेषज्ञहरु
पुलिस: को, कहाँ, र कहिले कल गर्ने
डचटाउनमा निर्वाचित अधिकारीहरू
हाम्रो भ्रमण गर्नुहोस् डचटाउनमा स्थानहरूको निर्देशिका रेस्टुरेन्टहरू, बारहरू, पसलहरू, सेवाहरू, र अधिक समावेश सहित!
को बारे मा अचल सम्पत्ति पेशेवरहरु लाई जानकारी खोज्नुहोस् डचटाउन मा खरीद र बिक्री.
मदत एएमपी Marquette पार्क पुनः सक्रिय गर्नुहोस्!
डचटाउन वेस्ट नेबरहुड एसोसिएशन
यसको बारेमा पत्ता लगाउनुहोस् DWNA, एउटा छिमेकको समूह खानपान को ग्रान्ड को पश्चिम।
Afsoomaal को Somali